Ukubona okungaphezu kokusebenzisa amakhamera we--- panoramic uchungechunge
Ngencazelo ye-Ultra-High, ividiyo engu-180-degree ne-360-degree yamavidiyo namandla anamandla, kanye nochungechunge lwephaneli kusuka ku-LS Vision yiyona ephoqelela kakhulu ...
Ngencazelo ye-Ultra-High, ividiyo engu-180-degree ne-360-degree ne-Graice, kanye nochungechunge lwephaneli kusuka ku-LS Vision yingxabano ephoqelelayo kakhulu ebhekisisani, ilungele ukuqapha okuvulekile.
Ngo-Agasti 17, 2016 LS Vision, i-No 1 Camera's Camera's Referer yemvelo enzima emikhiqizweni yokubhekwa kwevidiyo emisha kanye nezixazululo, wethula amakhamera ayo amasha we-panoramic. Amakhamera ahlinzeka nge-180- ne-360-degree, ukuhlazahla, ukukhishwa kwamahhala, i-ultra-high-high video, ukuhlanganisa umthungo video kusuka ezinzwa eziningi kuyunithi elilodwa. Ngeza kumandla anamandla we-Smart IR, ukusekela ipani yedijithali / ukutsheka/zukisa, ukufakwa kwayo okusebenziseka kalula nokucushwa, kanye nokusebenza kwayo okukhanyayo okuphansi, futhi umphumela uwukuhloseka okuhle kakhulu kwephaneli ephakeme emakethe.
Idizayinelwe izinhlelo zokusebenza zokuqapha zokuphepha ezinkulu ezifana nezinkundla zemidlalo, izikhungo zedolobha, izikhungo zezindiza nezindawo zokupaka izimoto, lolu chungechunge luvumela abasebenzisi ukuthi basebenzise amakhamera amaningi nge-Multi-Sensor Unit - Izindleko zokunciphisa kanye nokunciphisa ubuciko bezobuchwepheshe. Isixazululo Sokubhekwa Kwendabuko salolu hlobo lwe-180 degree noma i-360 degree Scene izodinga amakhamera ambalwa we-software kanye ne-server-level video software ukuhlanganisa izithombe bese udala isithombe esisodwa. Uchungechunge lwe-LS Vision Panoramic luyisixazululo sonke esihlanganisa izinzwa eziningi kwiyunithi eyodwa, ukuqeda isidingo se-software yokuthunga ividiyo.
Lolu hlobo lwamakhamera-in-in-One Design luvumela kuphela i-Ethernet ne-Power New One kuphela, enikeza ukufakwa okulula nokucushwa okulula. Amakhamera nawo aklanyelwe ukunikela ngezithombe zokubuka kuqala okulula ukuze ziphinde zisize ekusetshenzisweni, futhi zinciphisa kakhulu izikhathi zokulungisa nezindleko.
Amakhamera we-Series atholakala ku-12MP0-degree kanye ne-15 MP 360 degree variants, evumela abasebenzisi ukuthi bakhethe imodeli efanelekile yohlelo lokusebenza lwe-Surveillance elifanele. Amamodeli we-15 MP 360-degree asebenzisa izinzwa ezi-5 x 1 / 2.8 "Izinzwa zeScan CMOs ze-CROSS CMOs ukudala izithombe zazo zephaneli, kuyilapho amamodeli we-12 MP efaka izinzwa ezine ukukhiqiza izithombe zazo ezingama-180. Wonke amakhamera we-Panoramic Series alinganiswe nge-IP66 ukuze asetshenziswe ezinhlobonhlobo zezimo zezulu kanye nezicelo.
PHAMBI I-LS Vision IP Camera Solution Study
I-LS Vision Network Surveillance Video Review Video Server Qhathanisa ne-DVR OLANDELAYO